Semalt: Zombie PCs. Tahotra mangina ho an'ny fiarovana an-tserasera
Nanafika ny habaka ny atidoha. Ohatra, tamin'ny Jona 2004, dia nisy fanafihana DOS izay nanakatona ny tranonkala toy ny Google, Yahoo ary Microsoft tamin'ny alalan'ny PC (zombie).
Ny fipoahan'ny kankana toy ny MyDoom, Sobig ary Bagle dia nanondro ny fisian'ny teknolojia misimisy kokoa amin'ny fampielezana ny malware ary ireo teknika ireo dia tafiditra amin'ny fampiasana milina zombie.
Ny zombie dia solosaina izay nosamborin'ny antoko fahatelo tsy nahalala ny tompony. Raha vantany vao lasa lozisialy ny ordinatera, dia anisan'ny tambazotran'ny PC na zombie izy io.
Milaza ny manam-pahaizana momba ny fiarovana, fa ny milina zombie dia ampiasaina handefa ny code maloto ary manakana ireo tranonkala. Afaka mamela spam izy, manomboka ny famerenana ny fanompoana (DOS), manampahefana phisher, ary manely viriosy. Ny ankamaroan'ny spam dia nalefa tamin'ny fampiasana milina zombie. Ny mpampiasa dia afaka mampiasa mampiasa milina zombie mba haka sary vetaveta ary handefa votoaty ratsy ho an'ireo ordinatera tsy manan-tsiny. Mazava ho azy, rehefa lasa zombie ny ordinatera iray, dia tafiditra tanteraka ny tsiambaratelony, ary mety hosoloina sy hampiasaina ho an'ny tanjona ratsy ny fampahalalam-baovao manokana sy ara-bola.
Efa misy tafika matihanina mampiasa fitaovam-piadiana zombie. Tahaka ny tamin'ny volana Aogositra 2014, manodidina ny 150 tapitrisa PC maro an'habakabaka manerana an'izao tontolo izao no niasa. Ny fanamby goavana indrindra aterak'ity loza mitatao amin'ny aterineto ity dia ny fampiasan'ireo tompon'ny solosaina finday mbola tsy fantany akory ny zava-mitranga.
Fantatrao raha zeby ny solosainao
Toa mety hampiasa solosaina ny mpanafika mba hahatratra ny tanjona. Tsy mora foana ny mahafantatra raha ampiasaina ho toy ny milina zombie ny PC. Jason Adler, Semalt Mpitantana Success Manager, dia manome soso-kevitra ny fijerena ireto soritr'aretina ireto:
Ny fifandraisana am-bandefaka mora
Klavier na mozika tsy resy lahatra
Fiatrehana fiara mahery
Maro ny fanamafisam-peo miverimberina amin'ny mailaka avy amin'ny olon-tsy fantatra
Fanondro hafa fa mety ho zombie ny ordinateranao, dia midika fa manakorontana, ny tranonkala manakatona ny tenany noho ny tsy fisian'ny antony sy ny fahaverezan'ny fiatoana sarimihetsika mafy orina.
Na izany aza, ireo soritr'aretina ireo dia tsy marika manokana fa misy ny ordinatera. Ny ordinatera dia mety mampiseho ireo fihetsika ireo ary mbola tsy voavaha.
Miaro ny rafitrao amin'ny botnets
Raha ny mikasika ny filaminan'ny aterineto dia tsy azo ovaina loatra ny maha-zava-dehibe ny fampiharana ireo fampiharana. Miaraka amin'ny Windows Update foana. Ny fametrahana ny rindrankajim-pitantanana manokana sy ny rindrankajy Antivirus koa dia hampihena tokoa ny fampiasan'ny ordinatera amin'ny rindrambaiko maloto ateraky ny PC zébus. Ny fiarovana firewall vaovao dia hanome ny fanatsarana fiarovan-tena tena ilaina toy ny fiarovana amin'ny fidirana amin'ny alàlan'ny PC.
Ny fiarovana amin'ny vulnerabilities amin'ny cybercurity dia dingana iray mitohy - fametrahana sehatra firewall, ary ny rindrambaiko antivirus dia tsy afaka manangana ny zavatra rehetra mikasika ny fiarovana ny aterineto mandrakizay.
Maka ny fomba fijerin'ny mpifanolo-bodirindrina amin'ny fiarovana ny aterineto
Nanamarika i Fred Felman, mpanamboatra fiarovana an-tserasera ao San Francisco, fa mety horaisina amin'ny ady atao amin'ny malware ny fomba fijery manodidina. Mihevitra izy fa toy ny fijerin'ny olona ny fisehoan-javatra tsy mahazatra eo amin'ny manodidina sy ny seranam-piaramanidina, dia tokony hijery ihany koa ireo fihetsika hafahafa amin'ny tambajotra. Mijere foana ny milina sy ny milina hafa ao anaty tamba-jotra. Raha misy fiovana eo amin'ny sehatra mahazatra, ny fanadihadiana akaiky dia ilaina mba hanamboarana ny olana tratra araka izay haingana Source .